[त्यस मुलुकमा एउटा सानो समूहको 'ठुलाठालू, टाठाबाठा' भन्नेहरुले नै राणाकालीन वा पंचायतकालीन व्यवस्थामा जस्तै 'जंग लठैत शासन' शैलीमा हाली मुहाली चलाइरहेकाछन । उनीहरुले आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा ल्याउन दशौँ चोटी नियम कानून संसोधन पनि गरे । पात्रहरु उनै छन् र प्रवृति पनि उही, कोही कुनै कत्ति पनि फेरिएका छैनन् । सबै कुरा उस्तै उस्तै छन् । आज पर्यन्त नेपालमा मनुस्मृतिमा लेखिएको कुरो हुबहु चल्दैछ । चाहे उनीहरुले प्रजातन्त्र भनुन वा लोकतन्त्र, नेपालमा 'जंग लठैत शासन' शैली कै कुरा चल्दछ । मनुस्मृति एक खास जाति वा समुदायको हितका निम्ति बनाइएको सामाजिक नियम थियो । त्यसले समाजका अन्य समुदायमाथि बर्बर दमनको डण्डा बर्साउने गर्दथ्यो । आज पनि नेपालमा त्यो भन्दा कम भै रहेको छैन । विशेष गरी दलित समुदाय विरुद्ध मनुश्मृति 'जंग कानून १९१०' को आडमा यथावत् बरकरार रहेकै छ ।]
बि. के. राना
१) नेपाल अन्य मुलुकसंग तुलनात्मक हिसाबले आकारमा अलिकति सानो देखिए पनि जनसंख्याको हिसाबले विश्वको ४६ सौं ठूलो राष्ट्र हो । नेपाल सानो राष्ट्र भएकाले संघीयता चल्दैन भन्नेहरुका निम्ति स्विट्ज़रल्याण्ड र अष्ट्रियालाई हेर्दै यस बस्तुतथ्यलाई मनन् गर्नु ठीक हुन्छ । कुनै निश्चित सीमाना भित्र बसोबास गर्ने साझा भावनाले पल्लवित एवम् एकिकृत जनताको सामूहिक नाम हो -'राष्ट्र' । जमिन नभए पनि 'राष्ट्र' हुन्छ वा बन्छ । 'प्यालेसटाईन' यसको एउटा उदाहरण हो । वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्यूको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने सन् २०४० सम्ममा नेपालको जनसंख्या ४ करोड ५० लाख नाघ्ने छ भने आजको ५५ वर्ष पछि अर्थात् सन् २०७० मा ७ करोड ३० लाख नाघ्ने छ । त्यसैले यत्ति धेरै जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न त्यहाँ चल्तीको राज्य व्यवस्था - जुन आज पनि जंग बहादुर राणाले जनवरी ५, १८५४ मा लागू गरेको 'मुलुकी ऐन'द्वारा चलाइएको छ - त्यसले काम गर्ने अवस्था छैन । हालै गोरखा जिल्लामा घटेको संवेदनाहीन सरकारी कायरताको पराकाष्टा' लाक्पा तामांग दमनको घटना', पोहर साल झापाको बेलबारीमा तथाकथित 'ठूलो जात' र शभ्य भनिएकाहरुको जमातद्वारा एकजना दलित महिलामाथि गरिएको बर्बर, जंगली सांघातिक हमला र मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत 'एड्भोकेसी फोरम - नेपाल'को प्रतिवेदन अनुसार सरकारी संयत्र, नेपालको प्रहरी प्रशासनले "जनजातिमाथि बढी क्रुर र अमानवीय यातना दिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको" भन्ने आधारमा समेत नेपालमा मुलुकी ऐन - १९१० र राणाकालीन 'जंग लठैत शासन' अझै पनि कायमै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
२) माथिको बुदाँ नं.१ अनुसार नेपालमा 'आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय' जो मुलुकको कूल जनसंख्याको लगभग दुइतिहाई अर्थात् ६६ प्रतिशत छन, उनीहरु हाल लोकतान्त्रिक भनिएको परम्परावादी वा रुढिवादी (Fundamentalist) राज्य व्यवस्थाद्वारा पनि नराम्ररी पीडित रहेकाछन । त्यस्तो पीडाबाट राज्यले नै मुक्ति दिन सघाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टो संवेदनाहीन पीडकहरुको जमातको पक्षपोषण गरिएपछि त्यस्तो राज्य व्यवस्थाको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । उदाहरणका निम्ति गोरखा जिल्लाका लाक्पा तामांगलाई मृत्यू हुनेगरि गोलि नहानी अर्को कुनै तरिकाले स्थितिलाई काबूमा लिन किन सकिदैनथ्यो रु र साथै, भारत सरकारद्वारा सिंहदरबारको सत्तामा हुलिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश खिल राज रेग्मीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा भन्दा 'जुनिएर' अर्का उपेन्द्र कान्त अर्याललाई नेपाल प्रहरी प्रमुख बनाईएको घटना र उनै प्रधान न्यायाधिश खिल राज रेग्मीले बालुवाटार भित्रिएपछि दलित समुदायका कर्मचारीप्रति भेदभावको नीति अख्तियार गर्नुले पनि नेपालमा मुलुकी ऐन १९१० र राणाकालीन 'जंग लठैत शासन' अझै कायमै रहेको प्रमाणित गर्दछ ।आजसम्म पनि 'जंग लठैत मुलुकी ऐन - १९१०' मुलुकको संविधान भन्दामाथि रहेको तथ्य गोरखाको 'लाक्पा तामांग दमनको घटना'ले प्रमाणित गरेको छ ।
४) त्यस मुलुकमा एउटा सानो समूहको 'ठुलाठालू, टाठाबाठा' भन्नेहरुले नै राणाकालीन वा पंचायतकालीन व्यवस्थामा जस्तै 'जंग लठैत शासन' शैलीमा हाली मुहाली चलाइरहेकाछन । उनीहरुले आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा ल्याउन दशौँ चोटी नियम कानून संसोधन पनि गरे । पात्रहरु उनै छन् र प्रवृति पनि उही, कोही कुनै कत्ति पनि फेरिएका छैनन् । सबै कुरा उस्तै उस्तै छन् । आज पर्यन्त नेपालमा मनुस्मृतिमा लेखिएको कुरो हुबहु चल्दैछ । चाहे उनीहरुले प्रजातन्त्र भनुन वा लोकतन्त्र, नेपालमा 'जंग लठैत शासन' शैली कै कुरा चल्दछ । मनुस्मृति एक खास जाति वा समुदायको हितका निम्ति बनाइएको सामाजिक नियम थियो । त्यसले समाजका अन्य समुदायमाथि बर्बर दमनको डण्डा बर्साउने गर्दथ्यो । आज पनि नेपालमा त्यो भन्दा कम भै रहेको छैन । विशेष गरी दलित समुदाय विरुद्ध मनुश्मृति 'जंग कानून १९१०' को आडमा यथावत् बरकरार रहेकै छ ।
५) हाल राज्यसत्तासुख भोग गर्ने वा सत्तामोह कहिल्यै पनि नत्याग्ने वा त्यो मुलुकको सत्ता उनीहरुले बाहेक अरुले छुनखान हुदैन भन्ने प्राणीहरु संघीयताले मुलुकको समस्याहरु समाधान नगर्ने तर्क अगाढी सार्दछन । त्यसको ठीक उल्टो उनीहरु संघीयताले देश टुक्रने हल्ला फैलाउन पनि पछि पर्दैनन् । उनीहरु बिभिन्न देशमा हाल विकशित राजनीतिक घटनाक्रमको हवाला दिदै आफ्नो कुरा सही भएको जिकिर गर्दछन । उनीहरु दशौ किसिमका मुख्यमन्त्री वा डेपुटी मुख्यमन्त्री आदि इत्यादिका निम्ति खर्च बढी लाग्ने तुक न तर्कका कुराहरु गर्दछन । जब केन्द्रीय सरकार नै सानो भएपछि खर्च कसरी बढ्छ ? अहिले हाल भैरहेको ५ विकाश क्षेत्र, क्षेत्रपाल वा जिल्ला प्रमुखहरुका निम्ति कति खर्च लागेको छ ?अथवा त्यहिँ खर्चले नै संघीय राज्य व्यवस्था चल्ने होईन र ? यी सबै झूटमुठ कुराहरु उनीहरु सत्तामा टिक्नका निम्ति मात्र गरिरहेकाछन भन्ने सजिलै बुझिने कुरो हो । नेपालका आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रहरुले देश नै टुक्रा टुक्रा पारेर कुन नयाँ राज्य कसरी बनाउने ? अर्को कुरा उनीहरुले त्यहाका अधिसंख्यक भूमिपुत्रलाई सधै 'नालायक, लम्फू, कामै नलाग्ने, चौपट वा अक्षम' देख्छन । यस्तो अत्यन्त निन्दनीय दिग्भ्रम र भ्रष्ट सोचको कडा शव्दमा भर्त्सना गर्नु पर्दछ । उनीहरु मनुस्मृतिको श्लोकहरुले अर्थात् नियमले राज्य चलाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन । आजको २१ सौं शताव्दीमा यस्ता कुराको जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कम नै हुन्छ किनभने अहिले नेपाल भन्ने मुलुकको सत्ता सम्हाल्न जो कोही पनि सक्षम छन् - चाहे उनीहरु आदिवासी जनजाति होउन वा दलित नै ।
७) गएको अप्रिल १८ मा सगरमाथामा १३ जना शेर्पाहरु हिउँ पहिरोमापरि मारिए । नेपाल सरकारले सहायता स्वरुप जनही जम्मा ४० हजार मात्र दियो । तर उसले ति विदेशी आरोहण दलसंग कति पैसा लिएको थियो ? यदि त्यहाँ शेर्पाहरुको आफ्नो स्थानीय सरकार वा संघीय व्यवस्था भएको भए पीडित पक्षले आफ्नो हिसाबले कुरो राख्ने थियो । सबै हरिया डलर जति काठमाडौँका बिचौलिया (Middle Man) हरुले हात पारेपछि र स्थानीय शेर्पाहरुले आफ्नो गाउँमा त्यसरी पीडित हुनु परेपछि अहिलेको नाकाम राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीयताको निम्ति कुरो गरिएको कसरी गलत भयो त ?